Ushukela 31 okufanele ukwenze > Ukuhlaziya
Ushukela wegazi kusuka ku-31 kuye ku-31
Ebantwini abaphilile, amazinga kashukela egazi ngokuvamile asebangeni le-3.5-6.1 mmol / L. "Angagxuma" ngemuva kokudla aze afike ku-8 mmol / L. Kodwa ama-pancreas aphendula ngokuhamba kwesikhathi ngengxenye eyengeziwe ye-insulin, futhi amazinga evamile kashukela ayabuyiselwa.
Kepha kubantu abanesifo sikashukela, amanyikwe awakwazi ukukhiqiza i-insulin (yohlobo 1 sikashukela), noma ayihlanganisiwe ngokwanele (uhlobo 2 sikashukela). Ngakho-ke, ushukela wegazi kushukela ungaphezu kokujwayelekile.
Ngalesi sifo, izinhlobo ezimbili ze-hyperglycemia zingakhula:
I-hyperglycemia esheshayo - izinga le-glucose egazini lidlula i-7.2 mmol / L. Kuba khona uma onesifo sikashukela engadlanga lutho amahora angu-8 noma ngaphezulu.
I-Postprandial hyperglycemia - izinga likashukela ngaphezulu kwe-10 mmol / l. Ikhula ngemuva kokudla.
Izimpawu zokuqala ze-hyperglycemia
Izimpawu zokuqala ze-hyperglycemia kubantu abanesifo sikashukela yilezi:
Umile njalo. Umuntu angaphuza amalitha u-5-6 wamanzi ngosuku
Ukuchama okusheshayo ngenxa yokuphuza kakhulu
Ukuhlala ikhanda isikhathi eside
Kwehliswe ukubonwa okubonakalayo
Ukwephulwa kwendlela yokugaya ukudla (ukuqunjelwa, uhudo)
Isibindi nokunciphisa ukuzwela kwezandla nezinyawo
Lezi zimpawu ze-hyperglycemia zidalwa ukuqedwa kwama-ayoni kasawoti emzimbeni kanye nomchamo.
Usizo lokuqala lwe-hyperglycemia
Uma zonke izinkomba zibonisa ukuthi ushukela wegazi kushukela uphakanyisiwe, okokuqala udinga ukukala izinga lawo. Uma inkomba ye-glucose ifinyelele noma idlule ku-14 mmol / l, isiguli esincike ku-insulin sidinga ukufaka umjovo we-insulin emfishane ngokweqile noma emfushane.
Ngemuva komjovo, umuntu onesifo sikashukela udinga ukuphuza amalitha amanzi ayi-1-1,5 ngehora futhi alinganise ushukela njalo ngamahora ayi-1.5-2. I-insulin ikhishwa kuze kube yilapho sekwenziwe amazinga ajwayelekile kashukela wegazi. Uma ukufundwa kweglucose kungashintshi, umuntu udinga ukulaliswa esibhedlela.
Nge-hyperglycemia, ukugcwala kwe-acetone emzimbeni kukhuphuka kakhulu. Ukuyinciphisa, kuyadingeka ukuhlanza isisu ngesisombululo esibuthakathaka sokubhaka i-baking (amathisipuni ayi-1 ilitha elilodwa lamanzi abilisiwe).
Esimweni se-precoma, isikhumba somuntu siyoma. Ngakho-ke, udinga ukusula izandla, izinyawo, ibunzi nentamo yakhe ngethawula elinyibilikisiwe emanzini.
Ukugwema ukuqala kwezimpawu ze-hypoglycemia, abantu abanesifo sikashukela badinga ukulandela ukudla okunconywe udokotela, baphuze izidakamizwa ezinqunyelwe ngesikhathi, bagweme ukucindezela futhi benze umsebenzi olinganiselayo womzimba.
I-Hyperglycemia kushukela. Yini okufanele uyenze uma ushukela usuka esikalini?
Isifo Sikashukela Wegazi Likashukela
Ushukela wegazi 31: yini okufanele uyenze ngezinga lama-31.1 kuya ku-31.9 mmol?
Cishe isigamu seziguli, lolu hlobo lokukhohlakala kwesifo sikashukela luyabulala. Imvamisa, lokhu kwanda kwenzeka ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2 esithatha imithamo emincane yemithi enciphisa ushukela.
Isimo se-hyperosmolar cishe asitholakali kwabanesifo sikashukela esingaphansi kweminyaka engama-40, kanti ingxenye yalabo abanesifo sikashukela ingakatholakali. Ngemuva kokuphuma ekhefini, iziguli zidinga ukulungiswa kwelashwa ezikutholayo - kungenzeka kunikezwe i-insulin.
Izimbangela zokukhopha kuhlobo 2 sikashukela
Lesi simo sikhulu ngokuphelelwa ngamanzi emzimbeni ngokuphelelwa ngamandla kwegazi, kufaka phakathi ukuhlinzwa okuningana kwesisu, ukulimala, ukushiswa. Ukwehla emzimbeni kungahle kuhambisane nokusetshenziswa komthamo omkhulu we-diuretics, i-saline, i-Mannitol, i-hemodialysis noma i-peritoneal dialysis.
Izimbangela zokuphazamiseka kwebhalansi yamanzi kungaba:
Umkhawulo weFluid weziguli onokwehluleka kwenhliziyo.
Umsebenzi wezinso ongasebenzi kahle.
Isizathu sokwephulwa kwebhalansi yamanzi nakho kungadonsa isikhathi eside komzimba ngokujuluka okukhulu.
Iziguli zikhathazekile ngomlomo owomile, oba ongapheli, ukozela. Isikhumba, ulimi nolwelwesi lwe-mucous zomile, amachashazi wamehlo ayacwilisa, athambile ekuthinteni, kuboniswa izici zobuso. Ukuqhubeka kobunzima bokuphefumula nokwazi ukungalawuleki.
Izimpawu ezejwayelekile zokwehla kwesimo esimweni se-hyperosmolar zingukuphazamiseka kwemizwa:
Ubuthakathaka emilenzeni ngekhono elincishisiwe lokuhamba.
Ukunyakaza kwamehlo okubandakanya.
Lezi zimpawu ziwuphawu lwengozi e-acute cerebrovascular ngengozi, ngakho-ke, iziguli ezinjengalezi zingahle zitholakale ngokungafanele ngesifo sohlangothi.
Ekuhlolweni kwelebhu, i-glycemia ephezulu iyatholakala - ushukela wegazi 31 mmol / l (ungafinyelela ku-55 mmol / l), izidumbu ze-ketone azitholakali, izinkomba ze-acid-base balance zisezingeni lomzimba, ukuhlushwa kwe-sodium kudlula okwejwayelekile.
I-Urinalysis ingabona ukulahleka okukhulu kwe-glucose lapho kungekho i-acetone.
Ukubuyisela umthamo ojwayelekile wokujikeleza kwegazi kungokwenkomba eyinhloko yokwelashwa. Njengoba ukuqothuka kwamanzi emzimbeni kususwa, ushukela wegazi uzokwehla. Ngakho-ke, kuze kube yilapho kwenziwa kabusha komzimba okwanele, i-insulin noma ezinye izidakamizwa azinqunyelwe.
Ukuhlushwa kwe-sodium kungaphezulu kwe-165, izixazululo ze-saline ziyahambelana. Ukulungiswa kokuphelelwa ngamanzi emzimbeni kuqala ngo-2% ushukela.
I-Sodium iqukethe egazini kusuka ku-145 kuya ku-165, kulokhu, kunqunywa isisombululo se-0,45% se-hypotonic sodium chloride.
Ngemuva kokuncishiswa kwe-sodium ngaphansi kwe-145, kunconyelwa isisombululo se-0.9% saline sodium chloride yokwelashwa.
Yini okufanele ngiyenze uma, ngemuva kokuthola isinxephezelo esiphelele sokuphela komzimba, noshukela wami wegazi usalokhu uphakanyisiwe? Esimweni esinjalo, ukuphathwa kwe-insulin esebenza kahle ngofuzo kukhonjisiwe. Ngokungafani nesifo sikashukela sikashukela, isimo se-hyperosmolarity asidingi imithamo ephezulu yehomoni.
Ekuqaleni kokwelashwa kwe-insulin, amayunithi ama-2 e-hormone afakwa ohlelweni lokufakwa ngaphakathi (kwi-tube yokuxhuma ye-dropper). Uma ngemuva kwamahora angama-4-5 ukusuka ekuqaleni kwezokwelapha, ukunciphisa ushukela kuya ku-14-15 mmol / l kungatholakali, umthamo ungandiswa kancane kancane.
Ukuvimbela i-hyperosmolar coma
I-ketoacidotic ne-hyperosmolar coma zibonakala ngokukhuphuka kancane kancane kwe-glycemia, ngakho-ke, ngisho nezinga likashukela ngaphezulu kwe-12-15 mmol / l nokungakwazi kokulihlisa kanye nezinga elinconyiwe, udinga ukuvakashela i-endocrinologist.
Ngaphambi kokuvakasha, kunconywa ukuthi kuncishiswe inani lemikhiqizo yama-carbohydrate namafutha ezilwane ekudleni futhi uphuze amanzi ajwayelekile, uyilahle ngokuphelele ikhofi, itiye elinamandla, ikakhulukazi ukubhema notshwala.
Ekwelashweni kwezidakamizwa, ukulungiswa kwenziwa kuphela ngesivumelwano nodokotela. Akukalulekanga ukuthatha izidakamizwa ngokuzimela eqenjini le-diuretics nama-hormone, opholile futhi we-antidepressants.
Iziguli ezinenkambo engafakwanga yohlobo 2 yesifo sikashukela zichaziwe:
Ngokuvimbela i-hyperglycemia engalawulwa, iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2 kufanele zishintshwe ukuze zixube noma i-monotherapy ene-insulin ekusebenzeni okuphansi kwamathebulethi ukunciphisa ushukela. Isimo kuleli cala kungaba ukwanda kwezinga le-glycated hemoglobin ngaphezulu kwe-7%.
Njengoba ukubonakaliswa komtholampilo kwe-hyperosmolar coma kufana ne-pathologies ye-vascular acute yengqondo, kunconywa ukuthi zonke iziguli ezinesifo sohlangothi esisolisayo noma izimpawu ezingeke zichazwe kuphela yizingxaki ze-neurological zihlole amazinga egazi kanye nomchamo.
Mayelana ne-hyperosmolar coma echazwe kuvidiyo kule ndatshana.
Ushukela Wegazi 31 - Kusho ukuthini?
Ezigulini ezinesifo sikashukela i-mellitus, lapho izinga likashukela osegazini lingafinyelela amayunithi angama-31.1-31.2, izinhlobo ezimbili zesimo se-hyperglycemic zibhalwe phansi:
i-hyperglycemia esiswini esingenalutho, lapho okuqukethwe ushukela emzimbeni kudlula i-7.2 mmol / l. Kwenzeka uma isiguli singadli amahora angama-8 noma ngaphezulu,
i-postprandial (ntambama) hyperglycemia, ebonakala ngokukhuphuka koshukela ngaphezulu kwe-10 mmol / l, nokukhula ngemuva kokudla.
Ushukela osezingeni eliphakeme kwesinye isikhathi utholakala kubantu abangenaso isifo sikashukela. Kulokhu, sikhuluma ngamathuba okuthola isifo sikashukela sohlobo 1.
I-Pathological syndrome ingaqoshwa ngokuhlukunyezwa ohlelweni lwe-endocrine olubangelwa ukunganele kwe-gland yegland, i-adrenal gland, noma i-pituitary gland.
I-Hyperglycemia nayo ivela nge:
ukuthatha imishanguzo ethile (ama-corticosteroids, ama-beta-blockers, izidakamizwa ze-antipsychotic, ama-diuretics, njll.),
Izimpawu zokuqala zenqubo ye-pathological in diabetesics yilezi:
ukoma okukhulu. Okosuku, umuntu udla amalitha u-5-6 wamanzi,
i-polyuria (ukuchama kaningi) okuhambisana nokuphuza kakhulu,
ubuvuvu, ukukhathala, ukukhathala,
ukuhlaselwa ikhanda isikhathi eside
ukungasebenzi kahle kwe-erectile, ukuncipha kwe-libido,
Izinkinga zokugaya ukudla (ukuqunjelwa noma isifo sohudo),
ukuncipha kokuzwela, ukudonsa ezindaweni eziphezulu nezingaphansi.
Lezi zimpawu zidalwa wukuphuma okukhulu kukasawoti okuvela emzimbeni kanye nomchamo.
Kubalulekile! Uma kuvela izimpawu ezintathu zokuqala, kufanele ulinganise ngokushesha isilinganiso se-glucose egazini futhi ngokushesha ufune usizo lodokotela. Izimpawu ezinjalo zomzimba zingathuthuka ngokushesha bese ziholela ezinkingeni ezingenakuphikwa.
Ngabe kufanele ngesabe
Umphumela oyingozi kakhulu wokuthuthuka kwe-hyperglycemia eyingozi, lapho ushukela ukhuphukela kuma-31.3-31.9 amayunithi noma ngaphezulu, ukukhohlisa kwesifo sikashukela. Cishe isigamu seziguli, siyabulala. Isimo sesisulu siyanda ngokwanda komzimba. Ukudonsisa amanzi emzimbeni kuvame ukuhlotshaniswa nokusetshenziswa okungalawulwa kwama-diuretics nezisombululo ze-saline.
Imbangela yokungalingani kwamanzi nakho kungaba:
isifo sikashukela insipidus
umsebenzi wokuphazamiseka kwezinso,
ukwehla komzimba ngomjuluko owandayo.
Iziguli zinomlomo owomile, ukomiswa kwesikhumba nolwelwesi lwama-mucous, ukwehla kwezimpawu zamehlo, ukuciba kwezimpawu zobuso. Ubunzima bokuphefumula kanye ne-nebula yokwazi kukhula ngokushesha.
Izimpawu ezejwayelekile ze-hyperosmolar coma zifaka:
ubuthakathaka bemisipha namandla okuhamba,
ukunyakaza ngokuzithandela kwama-eyeb,
Isimo esinjalo somtholampilo sivele ngengozi ye-cerebrovascular eyingozi kakhulu, ngakho-ke, iziguli zingase zitholakale nesifo esingelona iqiniso, zisola unhlangothi.
Ngesikhathi sokuxilongwa, i-hyperglycemia iyatholakala - izinga likashukela lifinyelela amayunithi angama-31,4 noma ngaphezulu. Ukwakheka kwegazi kudlula okuqukethwe okujwayelekile kwe-sodium, kepha izidumbu ze-ketone azitholakali.
Umgomo oyinhloko wokwelapha ukuthuthukisa ukoma ukubuyisela umthamo wegazi nokuqeda ukomisa. Ngokushesha lapho ibhalansi yamanzi-usawoti isenziwejwayelekile, ukuhlangana kweglucose kwehlela emazingeni ajwayelekile. Ngenkathi kwenziwa kabusha komzimba, i-insulin nezinye izidakamizwa ezinciphisa ushukela azinqunyelwe.
Yini okufanele uyenze uma, ngemuva kokuncengela ukomisa, ushukela ungangehli, uchwepheshe uzothatha isinqumo. Ezimweni ezinjalo, kusetshenziswa i-insulin esheshayo (2 amayunithi). Uma ngemuva kwamahora angama-4-5 ama-Dynamics amahle engabhekwa, khona-ke umthamo uyakhula kancane kancane.
Okufanele ukwenze uma izinga ushukela lingaphezulu kwama-31
I-Hyperglycemia ingalawulwa kuphela ngokuqeda imbangela eyayibangele. Ezimweni eziningi, isimo esibuhlungu sinxephezelwa ngokungeniswa kwe-insulin. Ngokuqanjwa kwendlela engapheliyo ye-pathology, kusetshenziswa izidakamizwa ezinciphisa ushukela. Isiguli esine-hyperglycemia sibhekwa yi-endocrinologist. Kanye njalo ezinyangeni eziyisithupha uhlolwa ochwepheshe abancane: i-cardiologist, neurologist, nephrologist, i-Optometrist.
Udokotela weSayensi Yezokwelapha, iNhloko yeSikhungo Sikashukela - Tatyana Yakovleva
Sengineminyaka eminingi ngifunda isifo sikashukela. Kuyesabeka lapho abantu abaningi befa, futhi nangaphezulu bakhubazeka ngenxa yesifo sikashukela.
Ngiphuthuma ukutshela izindaba ezinhle - Isikhungo Sokucwaninga i-Endocrinology seRussia Academy of Medical Science sikwazile ukuthuthukisa umuthi oselapha ngokuphelele isifo sikashukela. Okwamanje, ukusebenza kwalesi sidakamizwa kusondela ku-98%.
Ezinye izindaba ezinhle: UMnyango Wezempilo uvikele ukwamukelwa kohlelo olukhethekile olunxenxa izindleko eziphezulu zomuthi. E-Russia, abanesifo sikashukela kuze kube nguMeyi 18 (kubandakanywa) ngingayithola - Ama-ruble ayi-147 kuphela!
Ngokukhuphuka kwamazinga kashukela, akuqaliwe ukwelashwa ngemithi, kepha ukudla okukhethekile. Ukudla kwesiguli akufaki ukudla okugcwele ama-carbohydrate asheshayo (ufulawa, i-confectionery). Imenyu yesifo sikashukela ifaka iklabishi elimhlophe, utamatisi, isipinashi, u-soy, i-oatmeal, iphalishi yommbila, inyama enamafutha amancane nenhlanzi.Ungabuyisela ukulethwa kwamavithamini ngezithelo ezinama-acid kanye namajikijolo, noma amavithamini akhethekile abanesifo sikashukela.
Uma ithebula lokudla ligcinwa, kepha lingenamphumela wokwelapha, udokotela ubeka imishanguzo esiza ama-pancreas ukukhiqiza i-insulin eyanele. Umthamo ukhethwa ngokuya ngezimpawu zomuntu ngamunye.
Kusetshenziswa ukwelashwa kwe-insulin, umuntu onesifo sikashukela kufanele aqaphe njalo ushukela egazini. Ngefomu lesifo elithambile, i-insulin ikhishwa ngaphansi kwesikhumba ekuseni, isigamu sehora ngaphambi kokudla ngesilinganiso samayunithi ayi-10-20. Uma lesi sifo sesithole izinhlobo eziyinkimbinkimbi kakhulu, khona-ke umthamo wansuku zonke uyanda kaningana.
Ukuphambuka okuphansi kokujwayelekile kungalawulwa ngokuzivocavoca okulinganiselayo ngokomzimba, bese usula umzimba ngesikhumba esomile ngokusula umzimba ngethawula elimanzi. Ngaphezu kwalokho, ukuqinisa ukungatheleleki futhi uthuthukise impilo ephelele, ungasebenzisa amakhambi abantu, ukwelashwa kwejusi, ukuthatha ama-decoctions kanye ne-infusions.
Izihlobo zesifo sikashukela kufanele zazi okufanele zikwenze uma ngokungazelele kugula. Uma izinga likashukela lingaphezu kwe-14 mmol / L, kufanele kubizwe i-ambulensi ngokushesha. Ngenkathi odokotela besendleleni, amabhande, amabala, ama-cuffs athukululiwe, izicathulo ziyasuswa. Nikeza ukufinyelela komoya omusha. Ngokuhlanza - beka isiguli ngasohlangothini lwaso, futhi ubuso buqondiswe phansi ukuvikela ukuhlanza kungangeni epheshaneni lokuphefumula.
Imvamisa nge-hyperglycemia enzima, izinga lakhona lingakhuphukela kuma-31,5-31.6 mmol / l, iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo lwe-1 zibhekene nazo. Ohlelweni lwesibili lokugula, isimo esibuhlungu sibhalwa phansi kaningi, ngoba kuhlotshaniswa nokuvela kwesifo sohlangothi noma isifo senhliziyo.
I-Polyuria Ukuchama okusheshayo, okuthi kuwo, kanye nomchamo, izakhi zamaminerali ezisekela ibhalansi kasawoti wamanzi zisuswe emzimbeni
I-Renal glucosuria Ukuba khona kweshukela kumchamo, okufanele kuvame ukungabikho. Ngokuqukethwe kwe-glucose ephezulu, izinso zisebenzisa kakhulu ushukela omningi ngomchamo. Ushukela ushiya umzimba kuphela kwifomu encibilikisiwe, okusho ukuthi amanani amaningi e-liquid kufanele asuswe nawo
I-ketoacidosis Njengomphumela wokulimazeka kokudla okunamafutha acid nama-carbohydrate, imizimba ye-ketone iyanqwabelana emzimbeni, iyibuthi ubuthi. Lesi simo sithathwa njengesihle kakhulu futhi sibhekwa njengesiyingozi impela.
I-Ketonuria Imizimba yeKetone idliswa kakhulu ngumzimba kanye nomchamo
I-Ketacidotic coma Kubonakaliswa ukunxenxa okuphindaphindwe kwe-emetic okungalethi impumuzo. Konke lokhu kuhambisana nobuhlungu besiswini, ubuvuvu, ukubekeka phansi, ukulahleka kokukhumbula esikhaleni nangesikhathi. Uma ohlukunyeziwe engasizwanga, khona-ke kuzoba nokuhluleka kwenhliziyo, ukuphefumula, ukujula okujulile, isifo esikhoxayo
Ukuze uvimbele ukuthuthukiswa kwe-hyperglycemia, ebonakala ngamazinga kashukela wegazi angama-31.7-31.8 mmol / l noma ngaphezulu, kuyadingeka ukulandela zonke izincomo zezokwelapha, ugweme ukungahambi kahle okukhulu, uphumule ngokuphelele futhi unamathele ekudleni okuphansi kwe-carb. Ezimpawu zokuqala ezethusayo, ungaziphathi, kepha bonana nochwepheshe.
Qiniseka ukuthi ufunda! Ngabe ucabanga ukuthi amaphilisi impilo yonke kanye ne-insulin kungukuphela kwendlela yokugcina ushukela ulawulwa? Hhayi iqiniso! Ungakuqinisekisa lokhu ngokwakho ngokuqala ukuyisebenzisa. funda kabanzi >>
Ushukela ophezulu wegazi ungakulimaza kanjani?
Ushukela ophezulu wegazi ungakulimaza kanjani? 24.04.2017 15:36
Esikhathini sikashukela, ushukela wegazi ungahlala uphakeme njalo. Ngokuhamba kwesikhathi, lokhu kulimaza umzimba futhi kuholela kwezinye izinkinga eziningi.Kodwa amazinga kufanele abe phezulu kangakanani? Futhi kungani kulimaza kakhulu umzimba wethu? Asilungise.
Yini ebhekwa ushukela wegazi ojwayelekile?
Ileveli ngaphansi kuka-5.5 mmol / l (100 mg / dl) esiswini esingenalutho okungenani amahora angama-8. Futhi ngaphansi kuka-7.7 mmol / l (140 mg / dl) 2 amahora emva kokudla.
Emini, ushukela ungaphansi kakhulu ngaphambi kokudla. Kubantu abaningi abangenaso isifo sikashukela, ushukela wegazi labo ngaphambi kokudla usukela ku-3.8 mmol / L (70 mg / dL) uye ku-4,4 mmol / L (80 mg / dL). Kwabanye abantu, i-3.3 mmol / L (60 mg / dl) yinto ejwayelekile, kwabanye, i-5 mmol / L (90 mg / dl).
Uyini ushukela ophansi?
Lo mqondo futhi uhluka kakhulu. Kubantu abaningi, amazinga kashukela akasoze wehla ngaphansi kuka-3.3 mmol / L (60 mg / dl), noma nokuzila isikhathi eside. Uma ulandela ukudla noma ukushesha, isibindi sigcina amazinga eglucose ebangeni elijwayelekile, siguqula fat nemisipha ibe ushukela.
Odokotela basebenzisa lezi zivivinyo ukuthola ukuthi unesifo sikashukela:
— Ukuhlolwa koshukela we-plasma osheshayo. Udokotela uhlola ushukela wegazi ngemuva kokuzila ukudla amahora angu-8. Umphumela ongaphezulu kwe-7 mmol / L (126 mg / dl) uwuphawu lokuba khona kwalesi sifo.
— Ukuhlolwa kokubekezelela kwe-glucose yomlomo. Ngemuva kokusheshisa okungamahora angu-8, uthola isiphuzo esimnandi esikhethekile. Ngemuva kwamahora amabili, izinga likashukela ngaphezulu kwe-11 mmol / L (200 mg / dl) uphawu lwesifo sikashukela.
— Ukuhlola okungahleliwe. Udokotela uhlola izinga likashukela wegazi futhi lingaphezu kuka-11 mmol / L (200 mg / dl), kanye nokuchama okuvamisile, ukoma okungapheli kanye nesisindo esibalulekile noma ukwehla kwesisindo. Ukucacisa ukutholwa, kwenziwa isivivinyo esengeziwe sokushukela esisheshayo noma ukuhlolwa kokubekezelela ushukela ngomlomo.
Noma yiliphi izinga likashukela ngaphezulu kwesijwayelekile liyisibonakaliso eshaqisayo. Izinga elingaphezulu kokujwayelekile, kepha lingafiki ushukela, libizwa nge-prediabetes.
Kungani kuphakama ushukela wegazi? I-glucose ngophethiloli oyigugu kuwo wonke amaseli omzimba wethu lapho engaphansi kwemikhawulo ejwayelekile. IGlucose nayo ingaziphatha njengobuthi osebenza kancane.
— Ushukela omningi ubhubhisa kancane kancane amandla amaseli we-pancreatic ukukhiqiza i-insulin. Umzimba unxephezela lokhu futhi izinga le-insulin liphezulu kakhulu. Ngokuhamba kwesikhathi, ama-pancreas abhekana nomonakalo ongapheli.
— Ushukela wegazi ophakeme ungadala ushintsho oluholela ekuqineni kwemithambo yegazi - atherosclerosis.
Cishe noma iyiphi ingxenye yomzimba wethu ingalimala ushukela omningi kakhulu. Imithambo yegazi elimele ibangela izinkinga ezinjengokuthi:
- Isifo sezinso noma ukwehluleka kwezinso okufuna ukuba kudayilizwe
- Ukuphazamiseka kwenhliziyo
- Ukulahleka kombono noma ubumpumputhe
- Ukunciphisa amasosha omzimba futhi kwandise nengozi yokutheleleka
- Umonakalo we-nerve (i-neuropathy) obangela ukudinwa, izinhlungu, noma ukuncipha kokuzwa emilenzeni, ezinyaweni nasezandleni
- Ukujikeleza kwegazi okumpofu emilenzeni
- Ukuphulukiswa kancane kwamanxeba nokuqunjelwa okuthile (ezimweni ezinzima)
Ukuthi iliphi ushukela wegazi kubhekwa njengokujwayelekile
I-glucose esiswini esingenalutho kumuntu onempilo kufanele ibe phakathi kuka-3.6 no-5.8 mmol / l (65 no-105 mg / dl).
I-sutra esiswini esingenalutho, isilinganiso seshukela legazi emadodeni nakwabesifazane abadala kufanele sibe phakathi kuka-3.8 no-6.0 mmol / l (68 no-108 mg / dl).
Amahora amabili ngemuva kokungenisa ukudla noma iziphuzo eziqukethe inani elikhulu lama-carbohydrate, amanani kufanele asuke ku-6,7 kuye ku-7.8 mmol / l (ukusuka ku-120 kuye ku-140 mg / dl).
Ushukela wegazi ezinganeni ezineminyaka engu-6 ubudala nangaphansi uthathwa njengophakathi kuka-5 mmol / L (100 mg / dl) no-10 mmol / L (180 mg / dl) ngaphambi kokudla. Ngaphambi kokulala, la manani kufanele abe ngu-6.1 mmol / L (110 mg / dl) abe ngu-11.1 mmol / L (200 mg / dl).
Ezinganeni ezisukela eminyakeni eyisithupha kuya kwengu-12 ubudala, izinga likashukela kufanele libe phakathi kuka-5 mmol / L (90 mg / dl) no-10 mmol / L (180 mg / dl), ngaphambi kokulala ngo-5.5 mmol / L (100 mg / dl) no-10 mmol / l (180 mg / dl).
Ezinganeni ezineminyaka engu-13 kuya kwengu-19, amanani kufanele afane nakwabadala.
Ushukela wegazi 15: okufanele ukwenze, yini imiphumela
Isiguli ngasinye kufanele sazi ukuthi ngabe i-glucometer ikhombise ushukela wegazi 15 okufanele ukwenze - ngemuva kwakho konke, imiphumela ingaba mibi kakhulu, kuholele esibhedlela futhi ngisho nokufa uma izinyathelo zingathathwanga ngesikhathi futhi izinga le-glucose likhuphuka. Uma ushukela wegazi oshukela onesifo sikashukela wanda, imvamisa yiphutha lakhe. Lokhu kusho ukuthi ukudla okunqunyiwe kwephulwe noma umjovo we-insulin ulahlekile. Kodwa noma ngabe yiziphi izizathu, kudingeka ngokuphuthumayo ukusiza isiguli.
Kungani i-hyperglycemia ikhula
Ngaphambi kokuthi wazi ukuthi yini okufanele yenziwe uma ushukela wegazi uneminyaka engu-15 nokuthi kungaba yini imiphumela, udinga ukuthola ukuthi ngabe lolu phawu lukhona ngaphansi kwaziphi izimo nama-pathologies.
Uma ngaphambi kwalokho ushukela wesiguli bekuyinto ejwayelekile futhi kungatholakalanga ukuthi unesifo sikashukela, isizathu kungaba ngokulandelayo:
Ukuphazamiseka kwesistimu ye-endocrine.
Ngokwemvelo, ukuthuthukiswa kwesifo sikashukela akubandakanywa.
Ngakho-ke, uma ukuhlolwa kwegazi kokuqala kubonise izinga likashukela le-15, khona-ke - okokuqala - udinga ukuqhuba izifundo ezinjalo:
izifundo nge-gypcemia ye-postprandial,
ukuzimisela kwe-glycosylated hemoglobin ne-c-peptide,
I-Ultrasound yezitho zangaphakathi (i-ultrasound).
Ukuhlolwa kwenziwa esiswini esingenalutho nangemva kokudla, ukuze ulandelele ngokunembile ukuguquguquka kwezinga le-glucose egazini, ukuthola ukuxilongwa.
Uma ukutholakala kwe-mellitus yesifo sikashukela sekuvele kwenziwa, isiguli sihlala sixwayiswa ukuthi yini ebanga ukugxuma emazingeni kashukela egazini nokuthi kufanele siziphathe kanjani kuleli cala. Ukwephula lezi zincomo kusongela impilo, kepha kwesinye isikhathi umuntu akakwazi ukulawula isimo.
Nikeza ukwanda ushukela can:
ukusetshenziswa ngokweqile kwama-carbohydrate akhanyayo,
ukweqa umuthi nge-insulin,
umsebenzi ophansi womzimba
noma yiziphi izifo ezithathelwanayo
ukungasebenzi kahle kwe-hepatic,
ukuthatha imishanguzo noma izindlela zokuvimbela inzalo ze-hormonal.
Imvamisa, uma isiguli kungeyona ingane encane, yena uqobo uyazi ukuthi yini edale ukuthi kugxume ushukela futhi uyakwazi ukuqeda le nto.
Ngamanye amagama, uma imitha ikhombisa izinga likashukela le-15 noma ngaphezulu, udinga ukwenza okuthile okungakaze kwenziwe, noma, ngakolunye uhlangothi, alahle isimilo esingalungile: yeka ukuthatha imishanguzo equkethe ama-hormone, ungadli amaswidi notshwala, wehlise umoya, uhambe ngezinyawo noma ube nesidlo sasemini.
Uma umjovo we-insulin ubuphuthelwe, lapho-ke kufanele usheshe ujove noma uphuze umuthi ezibhebheni. Lezi zinyathelo kufanele zisize ukubuyisa amazinga kashukela: uma ungasephuli umbuso futhi ulandele indlela yokudla, ngemuva kwezinsuku ezingama-2-3 izinkomba zizobajwayelekile.
Kepha kwesinye isikhathi kwenzeka ukuthi isiguli senze konke kahle, silimaza insulin njalo, noshukela usalokhu uphezulu. Kungani lokhu kwenzeka?
Kungaba nezizathu eziningana:
Umthamo ongalungile wesidakamizwa.
Ukwephulwa kokudla kanye nokuphathwa kwe-insulin.
I-insulin ehluphekayo noma ephelelwe yisikhathi.
Ukuphathwa okungalungile kwe-insulin, indawo ekhethwe ngokungafanele yomjovo.
Ukuhlanganiswa kwezinhlobo ezahlukene ze-insulin esitokisini esisodwa.
Ukusebenzisa utshwala ukukhubaza isikhumba ngaphambi komjovo.
Ukususa inaliti ngokushesha kakhulu esikhunjeni ngemuva kokulawula umuthi.
Zonke iziguli ezitholakala zinhlobo lwe-Type Iabetes mellitus ziyaqeqeshwa: udokotela uchaza ukuthi ungahlanganisa kanjani izidlo ne-insulin, ukuthi ungazijova kanjani kahle.
Futhi isiguli sithola isikhumbuzi. Kunamaphuzu abalulekile okungamele akhohlwe - ngokwesibonelo, awukwazi ukusula isikhumba ngotshwala, wenze imijovo kwizicubu ezihlanganisiwe, futhi ususe inaliti ngaphambi kwemizuzwana eyi-10 ngemuva kokuphela kokuphathwa kwe-insulin.
Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuyigcina kahle i-insulin. Ama-Ampoules anomuthi osuvele uvulekile kufanele ugcinwe kuphela esiqandisini. Ezinye izinhlobo ze-insulin zingaxutshwa, kanti ezinye azihlanganisi ngakho-ke azinikezi mthelela lapho zikhishwe.
Indima enkulu idlalwa umthamo ofanele we-insulin. Iqiniso ngukuthi ngokuhamba kwesikhathi, isimo sesiguli singashintsha. Uma lesi sifo siqhubeka, umthamo osungulwe ngaphambili ungavele unganele. Ngemuva kwalokho udinga ukuhlolwa okusha bese uphinda uvivinye lonke uvivinyo ukuze uhlole isimo sangempela sesiguli.
Kwesinye isikhathi kwenzeka ukuthi umthamo ukhethwe ngendlela efanele, kepha ngenxa yombono ongemuhle, isiguli sidonsa inani elinganele le-insulin kwisirinji. Kulokhu, umjovo kufanele wenziwe ngumuntu osondele noma umhlengikazi ovakashile.
Kungani ushukela ophezulu uyingozi
Ingozi enkulu noshukela ovela ku-15 ngenhla ukuthuthukiswa kwe-ketoacidosis. Leli igama lesimo lapho imizimba ye-ketone ikhiqizwa khona ngenkuthalo futhi inqwabelana emzimbeni, okuholela ekudakwiseni kakhulu.
Izimpawu ze-ketoacidosis zingokulandelayo:
isicanucanu, ukuhlanza, izihlalo ezingazinzile,
iphunga le-acetone ephuma emlonyeni,
ubuthakathaka, ukozela, ukudabeka,
ukuphathwa ikhanda nokulahleka kombono.
Qeda i-ketoacidosis esimweni sesibhedlela - isiguli sifakwa nge-insulin ene-insulin nezidakamizwa ezibuyisela ezilinganisweni zamanzi nosawoti kanye ne-acid emzimbeni. Uma i-ketoacidosis ingelashwa, i-hyperglycemic coma iyenzeka.
Izinga lokushaya kwenhliziyo lesiguli liyakhuphuka, izinga lokushisa lomzimba nokuncipha kwemisipha. I-membrane ye-mucous yomile kakhulu, ukuphazamiseka okuhlukahlukene kokuqwashisa kuqala. Ngemuva kwalokho isiguli siyeka ukuphendula ku-stimuli bese siwela ekhefini.
Ngaphandle kokunakekelwa esibhedlela okuphuthumayo nokunakekelwa okuphuthumayo, umuntu ufa amahora angama-24.
Isifo sikashukela yisifo esiyingozi esiyingozi futhi esiyingozi esinezinkinga eziningi. Akuphathwa, akunakwenzeka, zonke izinyathelo ezithathiwe zenzelwe ukugcina isiguli esizinzile.
Uma ungabanaki, izinga lakho loshukela wegazi lingagxuma futhi i-hyperglycemia ikhule. Isiguli uqobo kuphela esingavimba lokhu, siqaphele indlela esidla ngayo, singakhohlwa ngokuzivocavoca umzimba kanye nemijovo ye-insulin efike ngesikhathi.
Ushukela wegazi ungaphezulu kwe-7, kufanele ngenzeni?
I-Serum glucose ivela ngemuva kokudla ukudla okuqukethe ama-carbohydrate. Ngokuthakazelelwa kwayo yizicubu emzimbeni, kukhiqizwa i-protein insulin.
Uma kwenzeka kuphazamiseka izinsiza ze-insulin egazini, i-glucose ikhuphuka kakhulu.
I-Pathology inezigaba eziningana zobulukhuni obuhlukahlukene, ukukhomba i-pathology, iziguli zinqunyelwe ukuhlolwa kwegazi elabhorethri ukubona izinga le-glycemia.
Ungasithatha kanjani isivivinyo sikashukela?
Ngaphambi kokuthatha izivivinyo, iziguli zidinga ukwenqaba ukudla amahora angama-10, usuku olwandulela lolu ongeke ukwazi ukuphuza ngalo utshwala nekhofi. Igazi lithathwa ekuseni esiswini esingenalutho.
Ucwaningo olunjalo lukuvumela ukuthi unqume isimo sezinqubo ze-metabolic emzimbeni, izinga lokuphambuka kusuka kokujwayelekile kwezinkomba ze-glycemic, ukuthola isimo se-prediabetesic bese uthayipha i-1 noma i-2 mellitus yesifo sikashukela.
Ngabe abantu abaphilile banoshukela ongakanani? Inkomba yokuzila ukudla ye-glycemic imvamisa ebangeni le-3.3-5.5 mmol / L. Ngokukhuphuka kwalawa manani, kuhlaziywa ukuhlaziywa kanye nezifundo eziningi ezengeziwe ukunquma ukutholwa okufanele.
Uma esiswini esingenalutho umphumela uvela ku-5.5 kuya ku-6.9 mmol / L, kutholakala isifo sikashukela. Lapho i-glycemia ifinyelela inani elingaphezu kuka-7 mmol / l - lokhu kukhombisa ukuba khona kwesifo sikashukela.
Ngabe kuthatha isikhathi esingakanani ushukela wegazi osezingeni eliphezulu ngemuva kokudla amaswidi? Ukwanda kwe-glycemia ngemuva kwama-carbohydrate akhanyayo kuthatha amahora angama-10-14. Ngakho-ke, isikhathi esifanele impela lapho umuntu kufanele enqabe ukudla ngaphambi kokuhlaziya.
Ishukela le-serum elisheshayo liphakanyiselwe ku-5.6 - 7.8, ukuthi kuningi, kusho ukuthini futhi yini okufanele kwenziwe? I-Hyperglycemia ingadala:
isimo sokucindezela kwesiguli
ukuthatha i-hormonal, ukulawula ukuzalwa, izidakamizwa ezi-diuretic, ama-corticosteroids,
ukuvuvukala, izifo ze-oncological zamanyikwe,
isimo ngemuva kokuhlinzwa,
izifo zesibindi ezingamahlalakhona
i-pathology yesistimu ye-endocrine,
ukulungiselela okungafanele kwesiguli ngaphambi kokuhlolwa.
Ukuxineka kanye nokuzivocavoca ngokweqile kukhuthaza ukukhululeka kwezindlala ze-adrenal, eziqala ukukhiqiza ama-homoni aphikisayo nama-hormone akhuthaza ukukhipha ushukela isibindi.
Uma isiguli sisebenzisa umuthi, kufanele uxwayise udokotela wakho ngalokhu. Ukusungula isifo, ucwaningo lwenziwa kabili. Ukuze ungabandakanyi noma uqinisekise isifo se-endocrine esigulini, kwenziwa isivivinyo sokubekezelela ushukela noshukela ophenywe nge-glycated hemoglobin.
Uma ushukela we-serum esheshayo ukhuphuka ufike ku-6.0 - 7.6, yini okufanele yenziwe, malini futhi iyingozi, ukwelashwa kanjani i-pathology? Iziguli zinikezwa isivivinyo sokubekezelela i-glucose ngokulayisha ushukela uma imiphumela yokuhlolwa kwangaphambilini ingabaza. Lolu cwaningo lukuvumela ukuthi unqume ukuthi likhuphuka malini i-glycemia ngemuva kokudla kwama-carbohydrate emgodini wokugaya nokuthi lelo zinga lifinyelela ngokushesha kangakanani.
2 amahora emva kokusebenzisa isixazululo esimnandi, izinga le-glycemia kufanele libe ngaphansi kuka-7.8 mmol / L. Ukukhuphuka kwezinga lokufika ku-7.8 - 11.1 mmol / l kutholakala njengokubekezelelwa kwe-glucose, i-metabolic syndrome noma i-prediabetes. Lesi yisimo somugqa owandulela uhlobo 2 sikashukela.
I-Pathology iyelapheka. Iziguli zinikezwa ukudla okuqinile kwe-carb, ukusebenza komzimba kanye nokunciphisa umzimba. Kaningi, izinyathelo ezinjalo zanele ukubuyisela izinqubo ze-metabolic emzimbeni futhi zibambezele noma zivimbele ukuthuthukiswa kwesifo sikashukela isikhathi eside. Kwezinye izimo, ukwelashwa kwezidakamizwa kwenziwa.
Kungani kuhlaziywa i-hemoglobin ye-glycated?
Isifo sikashukela i-mellitus singaba nenkambo efihlekile, futhi ngesikhathi sokuphumelela kwezivivinyo, asikhombisi ukwanda kwe-glycemia. Ukubona ukuthi ushukela omningi emzimbeni ukhuphuke kangakanani ezinyangeni ezi-3 ezedlule, kuhlaziywa ukwenziwa kwe-hemoglobin ye-glycated. Impendulo yocwaningo ikuvumela ukuthi unqume iphesenti le-hemoglobin eye yaphenduka ne-glucose.
Ukulungiselela okhethekile ngaphambi kokudlula kokuhlaziywa akudingekile, kuvunyelwe ukudla, ukuphuza, ukudlala imidlalo, ukuhola indlela ejwayelekile. Ungathinti umphumela nezimo ezicindezelayo noma yisiphi isifo.
Umuntu ophilile unamalini amangaki e-glycated ku-serum? Imvamisa, le nto iqukethwe ebangeni le-4.5 - 5.9%. Ukunyuka kwaleli zinga kuveza ukuthi kunamaphesenti aphezulu amathuba okuba nesifo sikashukela. Isifo siyatholakala uma okuqukethwe yi-glyceated hemoglobin kungaphezulu kwe-6.5%, okusho ukuthi igazi liqukethe i-hemoglobin eningi ehlobene ne-glucose.
Yimuphi udokotela okufanele ngixhumana naye
Ukuhlaziya kuthini uma izinga likashukela wegazi likhuphuka laya ku-6.4 - 7.5 mmol / L esiswini esingenalutho, kuningi, kusho ukuthini futhi yini okufanele kwenziwe? Lawa yi-glycemia ephezulu, edinga ucwaningo olwengeziwe. Ngemuva kokuvela kokusolwa kwesifo sikashukela, kufanele ufune usizo lodokotela be-endocrinologist.
Imenyu kufanele ibe imifino emisha, izithelo, ukudla okunempilo. Ukusebenza ngokomzimba kuthuthukisa ukumuncwa kwe-insulin yizicubu zomzimba, lokhu kusiza ukunciphisa i-glycemia futhi kubuyise izinqubo ze-metabolic.
Uma ukwelashwa kokudla kanye nokuzivocavoca kunganiki imiphumela, kunikezwa umuthi owengeziwe wezidakamizwa ezonciphisa ushukela. Ukwelashwa kufanele kube ngaphansi kokuqashwa okuqinile kwezokwelapha.
Uma ushukela wegazi osheshe wanyuka waya ku-6.3 - 7.8, lokhu kuningi okumele ukwenze, ingabe lokhu kusho ukuthi ushukela usukhulile? Uma ukuhlolwa kokubekezelela kwe-glucose nokuhlolwa kwe-hemoglobin ye-glycated kuqinisekisa i-glycemia ephezulu, kutholakala isifo sikashukela. Iziguli kufanele zibhekwe yi-endocrinologist, ziphuze umuthi, zilandele indlela enqunyelwe yokudla.
Izimpawu zesifo sikashukela:
i-polyuria - ukwanda kwevolumu yomchamo,
umuzwa ongapheli wokoma, womisa ukuphuma kolwelwesi lwe-mucous lwe-patity yomlomo,
ukulamba kakhulu, ukudla ngokweqile, ngenxa yokwanda ngokushesha kwesisindo somzimba,
ubuthakathaka obujwayelekile, i-malaise,
ukuvuselelwa kwesikhathi eside kokuhlukumezeka, amanxeba, ukusikeka,
Ezigulini eziningi, izimpawu ezisezigabeni zokuqala zibonakala zifiphele noma zingafani nhlobo. Kamuva, kuvela ezinye izikhalazo, zibe zimbi kakhulu ngemuva kokudla. Kwezinye izimo, kungahle kube nokuncipha kokuzwela kwezinye izingxenye zomzimba, imvamisa kakhulu yilezi izingalo eziphansi. Amanxeba awapholi isikhathi eside, ukuvuvukala, ukwakheka kuyakhiwa. Lokhu kuyingozi, ubhadane lungakhula.
Ukwanda kokuzila ushukela we-serum kuwuphawu lokuphazamiseka kwe-metabolic emzimbeni. Ukuqinisekisa imiphumela, kwenziwa izifundo ezengeziwe.
Ukutholwa ngesikhathi ngalesi sifo, ukuqapha ngokuqinile izondlamzimba nokwelashwa kuzokwenza isimo saso siguli, kuzinze i-glycemia, kuvikele ukukhula kwezinkinga ezinzima zesifo sikashukela.
Ukwephula izinqubo ze-metabolic kubangela ukungasebenzi kahle kokugaya ukudla, izinzwa, uhlelo lwenhliziyo futhi kungadala ukushaya kwenhliziyo, isifo sokuqina kwemithambo yegazi, isifo sohlangothi, i-neuropathy, i-angiopathy, isifo senhliziyo.
Uma izinga le-glycemia liphezulu kakhulu, isiguli singene ekhefini, okungaholela ekukhubazekeni okukhulu noma ekufeni.
Imikhuba yoshukela wegazi kwabesifazane nakwabesilisa
Sijwayele ukusho ukuthi "ushukela wegazi", kungahle kunembe kakhudlwana ku- "level kashukela." Ama-pancreas akhiqiza ama-hormone akhethekile, i-insulin ne-glycogen, abhekene nokugcina amazinga evamile eglucose. Uma kwenzeka noma yikuphi ukungasebenzi kahle ohlelweni, umzimba uphelelwe amandla, ukukhathala nobuthakathaka kubonakala.
Izinqubo ezinjalo ziyingozi, ngokuyinhloko ngenxa yokuthi ngesikhathi sokungasebenzi kahle kwamanyikwe, umthwalo wezinso uyakhuphuka, odinga okuqukethwe okufakwayo okugelezayo emzimbeni.
Lapho-ke imithambo iyahlupheka, ngoba igazi eligqinsiwe ngokwenyama alinakungena kuma-capillaries amancane, futhi kusuka kulokhu kusabela okungaphendukiyo sekuvele kwenzekile kuzo zonke izitho nezinhlelo.
Okubhekwa njengokujwayelekile kweshukela wegazi
Imikhuba yabesifazane nabesilisa ayihlukile, kunokukhuphuka okuncane kwamazinga kashukela ngeminyaka. Igazi lokuhlaziywa kumele linikelwe ekuseni, esiswini esingenalutho. Igebe elifanele phakathi kokudla kokugcina nokuhlaziywa amahora angama-10-14. Ngosuku olwandulela lolu, akukanconywa ukuthi udle ukudla okunamafutha nokufrisiwe, uphuze uphuzo oludakayo futhi ube novalo.
Uma zonke izimo zihlangabezana, khona-ke isilinganiso se-glucose egazini esithathwe emunweni (capillary) kufanele sibe ngu-3.3-5.5 mmol / L. uma isampula yegazi yenziwa ivela emithanjeni, khona-ke isilinganiso esijwayelekile sikhuphuka ngo-12% futhi sifinyelela ku-5-6.1 mmol / l. Ngezikhathi ezahlukahlukene zosuku, izinkomba zizohluka, ngakho-ke, kuyalulekwa ukuthi kuhlaziywe ekuseni.
Imvamisa, amazinga kashukela egazini kudingeka ukuthi abhekelwe ukuze kutholakale isifo sikashukela ngesikhathi - isifo esingaqondakali esingahamba isikhathi eside noma sifane nokugula okujwayelekile kwesizini. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kulabo abanezihlobo ezinesifo sikashukela, abantu asebekhulile nabakhuluphele abaphila impilo yokuhlala phansi.
Izimbangela Zoshukela Omkhulu
Izinga likashukela alikwazi ukukhuphuka ukusuka ekuqaleni, uma umuntu enamathela ekudleni okufanele nasendleleni esebenzayo, khona-ke ukwanda koshukela kubonisa ubukhona bezifo.
Izizathu eziphambili zokwandisa ushukela wegazi yilezi:
Ukusetshenziswa ngokweqile kokudla, ikakhulukazi ama-carbohydrate angagayeka kalula,
Ukubhema nokuphuza utshwala,
Ukucindezela kwengcindezi yezinzwa,
Izifo zohlelo lwe-endocrine: i-thyrotooticosis, isifo sikaCushing, njll,
Izifo zamanyikwe, isibindi nezinso,
Ukuthatha izidakamizwa ezithile ze-steroid, izindlela zokuvimbela inzalo noma okokugaya,
I-premenstrual syndrome kwabesifazane.
Uma ukuhlaziya kwembula okuqukethwe ushukela okukhulayo, isiguli sinikezwa isiphuzo sesisombululo sikashukela bese lokho kuhlaziywa kuphindwa ngemuva kwamahora amabili. Kwesinye isikhathi ukudla okujwayelekile ngaphambi kokunikela ngegazi (umuntu uchitha isikhathi esiningi eya esikhungweni sezokwelapha futhi adle i-apula) kungadala ushukela ukuthi ukhuphuke.
Izimpawu zokwanda ushukela wegazi
Amazinga kashukela akhuphukile aholela ku-hyperglycemia, engaqashelwa yizimpawu ezilandelayo:
Umuzwa ongapheli wokoma
Umuzwa womlomo owomile
Ukuchama kaningi, kubuhlungu njalo,
Ukwehla kwesisindo phambi kwenhliziyo enhle,
Ukuphefumula okunomsindo, nokungalingani.
Kuyiqiniso, ukuvela kwalezi zizathu eziningi kuyisikhathi sokuhambela ophuthumayo udokotela nokuhlolwa ushukela ngokushesha.
I-Hypoglycemia ukuncipha koshukela wegazi ngaphansi kuka-3.5 mmol / L.
Kubalulekile ukwazi izimpawu ze-hypoglycemia futhi uzithole ngesikhathi:
ubuthakathaka kanye nomuzwa wokuqothuka,
sinciphise isikhathi sokunakwa.
Ungawehlisa kanjani ushukela wegazi
Ukudla okulinganiselayo kuzosiza ukwehlisa ushukela wegazi, ongafinyelelanga ezingeni elibucayi. Ukudla kususelwa ekuqukweni ekudleni kokudla okuqukethe ama-carbohydrate “asheshe”, anikeza umuzwa wokugcwala, kepha asheshe kakhulu ukumunwa.
Le mikhiqizo ifaka:
Ukulungisa izinqubo ze-metabolic futhi uqhubeke nokugcina amazinga kashukela egazini ngaphakathi kwemikhawulo ejwayelekile, kunconyelwa ukunikeza ukukhetha kumikhiqizo efana:
Izincomo ezijwayelekile zihamba emoyeni omusha, ukondleka okwenziwe ngokudla kanye nokuzivocavoca okwanele komzimba. Ukugcina amazinga kashukela ejwayelekile kungakapheli amandla kunoma ngubani ongafuni izinkinga zempilo ekugugeni.
Ukhuphuka ushukela wegazi njalo akuyona uphawu lwesifo sikashukela
IGlucose yingxenye ebaluleke kakhulu yamaseli omzimba womuntu. Ezingeni lasekhaya, ungaphikisana kakhulu ngendlela othanda ngayo ukuthi umuntu udinga ushukela noma cha. Isayensi ayingabazi le nkinga: ushukela uwumthombo ophambili wamandla kuwo wonke amaseli ethu, futhi kumangqamuzana egazi abomvu ngokuvamile uwukuphela kwawo.
IGlucose ingena emzimbeni ngokudla futhi, ingena egazini, ithwalwa yiwo wonke amaseli wezicubu nezitho ezibalulekile zomuntu. Ngokuntuleka kwayo, umuntu uzizwa eshayekile, ubuthakathaka futhi buthele. Lokhu kungukudla okuyinhloko kwengqondo, ngoba kungasebenzisa kuphela amandla avela kuma-carbohydrate. Ngokuntuleka kwe-glucose egazini, impilo yomuntu iya ngokuya iba nzima, umuntu akakwazi ukugxila, futhi inkumbulo iyahlupheka.
IGlucose iyadingeka futhi ekusebenzeni kwenhliziyo okujwayelekile. Iyingxenye yezidakamizwa eziningi ezilwa nokuqhaqhazela kanye nokufakwa kwegazi okusetshenziswa kwizifo zesistimu yezinzwa ephakathi, isibindi, izifo ezahlukahlukene nokudakwa. Ngaphandle kwale nto ebalulekile, umuntu ubengeke akwazi ukubhekana nengcindezi.
Futhi i-glucose, ukungena egazini, ilungisa isimo sengqondo, inika ukuthula kwangaphakathi nokuzethemba.
Kepha ushukela ngokweqile uyingozi. Kodwa-ke, kufanele ukuthi ukwanda koshukela wegazi akuyona njalo uphawu lwesifo sikashukela.
Amazinga kashukela wegazi wesikhashana angahluka:
- ngokuqina komzimba, - ezimweni ezicindezelayo, - ngokwenyuka kwezinga lokushisa lomzimba (igciwane, amagciwane kanye namakhaza), - ngokuqhubekayo nobuhlungu besifo, - ngokushiswa,
- ngokumelene nesizinda sokuqanjwa kokuthathwa kwesisu.
Ukwanda okuqhubekayo ushukela wegazi kungenzeka:
- ngezinqubo ze-pathological ze-gastrointestinal ipheshana lesibeletho, - ngesifo sokuqina kwesibindi, - ngezifo ezithathelwanayo zezindlala ze-endocrine (amanyikwe, i-hypothalamus, i-adrenal gland kanye ne-pituitary gland),
- ngokungalingani kwe-hormonal maqondana nokuthuthukiswa kwe-endocrinopathies nangesikhathi sokukhulelwa.
Kodwa-ke, imbangela ejwayelekile yokwanda okuqhubekayo kweglucose egazini sikashukela.
Ngokwanda okuqhubekayo koshukela wegazi, ekuqaleni, azikho izinguquko ezizwayo noma isiguli asihambelani nokubaluleka okuthile kubo, kepha ngasikhathi sinye, kwenzeka izinguquko ezibhubhisayo emzimbeni wakhe. Ngakho-ke, ukuze ulondoloze impilo, kufanele wazi ukuthi iziphi izimpawu ezingabonakala ngokunyuka kweglucose yegazi.
Izimpawu eziphambili ezixwayisa ngoshukela ophezulu wegazi yilezi:
- Ukuchama okwandayo kanye nokwanda kwenani lomchamo ochithiwe, - ukoma okuqinile njalo nomlomo owomile, kufaka phakathi nobusuku, - ukukhathala okusheshayo, ukubekezela kanye nobuthakathaka obukhulu, - isicanucanu, ukuhlanza okungatheni, - ukulimala okuqhubekayo kwekhanda, - ukulahleka kwesisindo okungazelelwe ,
- Ukulimala okubukhali kokubonakalayo kungenzeka.
Iqembu eliyingozi lesifo sikashukela lifaka:
- Abesifazane abahlushwa i-polycystic ovary, - abantu abanamazinga aphansi e-potassium egazini, ikakhulukazi lesi sifo sivela ezigulini ezinomfutho we-arterial ngenxa yokuthi ingcindezi eyandayo ikhuthaza ukuchama njalo nokucishwa kwe-potassium emzimbeni, - iziguli ezikhuluphele noma ezikhuluphele, - ngenhloso yokuzalwa kwesifo sikashukela,
- abesifazane abake baba nesimo sesifo sikashukela ngesikhathi sokukhulelwa.
Yiluphi ushukela wegazi ojwayelekile?
Ushukela (ushukela) egazini elithathwe esiswini esingenalutho kuvame ukuba ku-3.88 - 6.38 mmol / l, ezinganeni ezisanda kuzalwa: 2.78 - 4.44 mmol / l, ezinganeni: 3.33 - 5.55 mmol / l Kwesinye isikhathi, kwifomu lokuhlaziya, kukhonjiswa izinkomba ezejwayelekile ezihlukile, futhi udinga ukugxila kuzo - ngezindlela ezahlukile, izinkambiso nazo zihlukile.
Okudingayo ukwazi ngokuhlolwa ushukela wegazi
Ukuthola umphumela wezinhloso, imibandela ethile kufanele ibonwe:
ngosuku olwandulela ukuhlaziya kungcono ukungabuphuzi utshwala, amahora angama-8 kuya kwayi-12 ngaphambi kokuhlaziywa ungadli lutho, phuza amanzi kuphela, ungaxubeki amazinyo akho ekuseni ngaphambi kokuhlaziywa (izinyo lamazinyo liqukethe ushukela, lithakwa ngokusebenzisa ulwelwesi lwe-mucous lomgodi womlomo futhi lungathinta ukunemba kwezinkomba ) Ngenxa yesizathu esifanayo, izinsini ezihlafunayo akufanele zihlafunwe ngaphambi kokuhlaziywa.
Ukuhlolwa ushukela wegazi
QAPHELA! Ngaphambi kokubuza umbuzo, sincoma ukuthi uzijwayeze ngokuqukethwe yilesi sigaba. Kungenzeka ukuthi lapho uzothola impendulo yombuzo wakho njengamanje, ngaphandle kokuchitha isikhathi ulindele impendulo evela kudokotela wezokwelapha.
Buza umbuzo wakho Hlela: ngokusebenziseka ngosuku
Agasti 12, 2009
isikhathi esingangenyanga noma ngaphezulu isimo sezulu besishisa kakhulu, futhi ngaqala ukuphuza amanzi amaningi, futhi ngangivame ukuya endlini yangasese futhi ngemuva kwesikhashana ngabona ukuthi ngiphelelwe yisisindo, ngaphandle kwalokho, umbono wami wehla, kungaba yini?
Janawari 13, 2010
Umeluleki wezokwelapha we-portal health-ua.org uphendula:
Sawubona, Alexander! Ukuhlanganiswa kwezimpawu ezinjengokwehla kwesisindo, ukoma, ukuchama kaningi kanye nokukhubazeka okubukwayo kungenzeka kukhombisa isifo sikashukela. Ngaphezu kwalokho, indlela eyinkimbinkimbi yesifo sikashukela.
Kulokhu, kuyaphuthuma ukuhlolwa okulandelayo: igazi likashukela, ukuhlaziya okujwayelekile kwegazi nomchamo, ukuhlolwa kwegazi nge-biochemical, ukubonisana nodokotela wezifo zamehlo nokubonisana nodokotela ovumayo nge-endocrinologist. Musa ukubambezela ukuvakashela udokotela.
Disemba 15, 2010
Kubuza uVictoria Yurchenko:
Yini okufanele uyenze uma ushukela wegazi engu-5.8? kanjani ukubuyisa kokujwayelekile?
Izimpendulo Zuev Konstantin Alexandrovich:
Izinga lokuzila ushukela wegazi kubantu abanempilo lifinyelela ku-5.5 mmol / L. Kulesi simo, inkomba isuka ku-5.6 kuye ku-6.9 mmol / L (uma ushukela amahora amabili ngemuva kokulayisha kwe-glucose ingaphansi kuka-7.8 mmol / L) ngokusho kwezincomo zamanje, kubhekwa njengokuzila okusheshayo kwe-hyperglycemia.
Eminye imihlahlandlela yesimanjemanje ibiza ukuthi i-hyperglycemia yokuzila ukudla kanye ne-prediabetes engasebenzi kahle.Mayelana ne-prediabetes, manje sekuxoxwa okuningi kushukela. Lokhu kungenxa yokuthi, okokuqala, iziguli ezingenaso isifo sikashukela, kanye nokuphazamiseka kwangaphambi kwalokho kwe-carbohydrate metabolism, kunengozi eyandayo yezifo zenhliziyo (ukushaya kwenhliziyo, imivimbo, njll.).
), okwesibili, namuhla sekuvele ubufakazi bokuthi kwenziwa ucwaningo olunzulu lokuthi ukuqokwa kwezinhlobo ezithile zama-hypoglycemic agents kungavimba ukuthuthukiswa kwe-mellitus elandelayo yesifo sikashukela kulesi sigaba seziguli. Kunemininingwane ecacile ngokusebenza komzimba onzima. imithwalo nokudla ukuvimbela ukuthuthukiswa kwesifo sikashukela ezigulini ezine-prediabetes.
Ngokwezincomo ezikhona, iziguli ezine-prediabetes zidinga ukunikela ngegazi ushukela kanye ezinyangeni ezi-6, futhi kungcono ukwenza isivivinyo sokubekezelela ushukela.
Janawari 09, 2010
Sawubona Ngiyacela ungisize ngibhekane nalesi simo esilandelayo! Umama wami uneminyaka engama-60 ubudala, asikho isisindo ngokweqile nezifo ezihlangene. Lapho kulinganiswa ushukela wegazi (inkampani ngayinye) nemitha kashukela wegazi ekhaya, bathola: esiswini esingenalutho 5.
I-0 mmol, ilinganiswe ngemizuzu engu-5 ngemuva kwetiye elingafakwanga itiye nge-marmalade emnandi kakhulu - 15 mmol / L (.), Ngemuva kwehora eli-1 - 9.1 mmol / L, ngemuva kwamahora ama-2 - 7.9 mmol / L.
Kungenzeka yini kube nokwanda okunjalo koshukela egazini ngaphandle kwesifo sikashukela? Kuyingozi kangakanani lokhu? Wanikela ngegazi esiswini esingenalutho elabhoratri - 4.9 .. Ngiyabonga ngosizo lwakho.
Meyi 26, 2010
Umeluleki welebhu yezokwelapha i- "Sinevo Ukraine" uphendula:
Izimpawu kashukela wegazi ophansi kwabesifazane
I-pancreas ye-Aberrant: yini?
Izinkinga Zesikhumba Sikashukela